Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "mukadzi Pope", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "mukadzi Pope", iro shamwari manzwiro?
Noble mukadzi akapfeka chifukidziro chena pamberi weshongwe chakatorwa se "mukadzi Pope" mbiru pedyo nzira
B kuti kuzvitaurira 3500 Yen vakasununguka zvaanoreva
nyanzvi kufembera ari neizvi nechinzvimbo uye J asi anomirira dimikira riri agere ndiye mukadzi Pope pakati vachishandisa kadhi. B ndiye "Bhoazi (rima)", J anonzi kureva mhandara kuti wanamatira vafundisi kubva kupfeka zvinomirira "Yahin (chiedza)", chidzitiro chena. Nekuti vakadzi
Catholic hazviiti here kuti kune zvakawanda zvinzvimbo mupristi, mukadzi uyu yakapirikirwa serinomiririra Anti-Papa. The ruoko kubva kuti uine Old Testament rinonzi "Tora", mukadzi uyu kwave kunzwisisa kuti anokudzwa zivo, mukadzi Pope uye kadhi rinomiririra ruzivo uye kwamachinda, kuvimbika, uye sagacity zvave.
mukadzi Pope Maonero nzvimbo ndiyo shamwari manzwiro
mukadzi Pope vaifungidzirwa chii chinorehwa njere kana wakazviratidza yakanaka chinzvimbo, inopenya, vanofara, akadai rugare rwepfungwa, kuzadzika pfungwa sezvo mumhepo kufadza aionekwa kuva. Mupikisi pakati nemanzwiro kana mukadzi Pope akabuda zvakanaka nzvimbo yava anoonekwa somunhu vakangwara chaizvo munhu chinhu kwenyu. Ndinoda kutaura pedyo napedyo, isu vanozeza uye musoro dzisingambosvikiki yakanaka.
mupikisi panyaya zvose nepfungwa vanhu kuvimba zvinhu zvenyu, tinoziva kuti yakachengeteka chaizvo kuna Tsukiaeru vanhu. Pane kutora kuoneka chiito, vachifunga kuti kuda kupedza zvishoma nezvishoma pamwe chete, zvinoita sokuti vanosarudza avo vanopedza wakadzikama nevanhu vaviri. Naizvozvo muchato chido ichiri hapana chakanaka, ndinovimba uye ndinoda kuti tikoshese ukama hwavo.
nyaya vanhu rusina kukwana mberi rudo pane kungangova kururama kuti kuzvikudza yakakwirira vanhu zvinhu zvenyu. Nokuti isu takafunga zvakaoma kutaura uye vakangwara, unoedza kutaura zvakawanda Frank kune pati, ndapota edza kuedza to'll kudzikisa pachikumbaridzo nokuda anokumhan'arira. Kupfuura zvimwe vanhu vaviri kana zvakadaro Distance akadzokera.
mukadzi Pope of anokumhan'arira manzwiro
mukadzi Pope kwakaita uzivi uye noungwaru mufananidzo harungashandurwi chinzvimbo zvinofanirwa rinorevei, asi panzvimbo kuva zvichava muvengi anova achinje chinzvimbo. Chemaneka uye paranoia, zvakadai kushatirwa, akadai kusavimbana, ndiye neizvi nzvimbo womukadzi Pope kubva tilting anofungidzirwa kuti pakuipisisa. Kana kunzwa zvakanaka anokumhan'arira mashoko avo kuna vose ndinofunga vanhu, kana pane mukana kuti kunzwa zvishoma anaerobic chemaneka yenyu.
kungwarira kuvimba shamwari mashoko kuti varege kumutsa kusanzwisisa uye kusavimba mamwe bato, henyu sezvo anomira. Kana vanhu rusina kukwana mberi rudo ndirege kutenda norudo kunanga zvinhu zvenyu. Sezvo sagacity yako yakakwirira ngozi kuti zvinoratidzwa zvoudyire ari pabonde naye, ndapota itai auraye ushamwari ezvinhu nguva dzose neZvapupu achinyemwerera.